Simele indlu yezwe njengesidleke esihle lapho umuntu angakwazi ukuphumula nomphefumulo wakhe nomzimba wakhe. Sifuna ukuvuselela imibono nemicabango evelele kakhulu ephathelene nokuklama nokuklama kwayo. Esikhathini sangasese, cishe wonke umuntu angakha ipharadesi phansi.
Umklamo wendlu yezwe
Umklamo wesicabha se-cottage.
Amashumi amaphrojekthi akhona kulula ukudidisa noma ubani ofuna ukwakha indlu yezwe noma ukushintsha ukubukeka kwawo. Kubalulekile ukuhlola amakhono akho wezezimali. Kuxhomeke kubo, indlu yakho izobukeka njengenqaba yezintambo noma ibe nokubukeka okulula, kodwa ngokukhululekile. Inombolo yamakamelo ama-esitolo amabili ajwayelekile kakhulu ngenxa yokuthi ukwakhiwa kwabo kuyabiza kakhulu kunezindlu zendabuko eyodwa, futhi, abaningi bazama ukugcina amamitha ayizigidi ezingamakhulu ayisishiyagalombili zomhlaba. Izinhlobo eziyinkimbinkimbi eziyinkimbinkimbi zezakhiwo nezindawo zokuphahla zibiza izindleko. Ukusebenza ekwakhiweni kwendlu yezwe, udinga ukucabangela indawo yezindawo ezizungezile noma uthembele ngokuphelele umakhi wezakhiwo.
Umklamo wekamelo lokuphumula e-cottage.
Uma singafuni ukushintsha imikhuba yethu futhi sithanda isitayela samanje , ukuklama kwendawo yokuhlala kungakhiwa njenge-analog yedorobho yedolobha, kodwa ngekamelo lokulala elisha futhi elikhanyayo. Ukukhetha i-minimalism, siyeka emafomu alula, nge-palette elinganiselwe yezinto zokwakha, yenza ukusetshenziswa okungaphezulu kwemisebenzi yengilazi. Isifiso sokusondelana nemvelo siboniswa ekwakhiweni kwezindlu ezinamapulangwe, ukusetshenziselwa ukwakheka kwezindlela ezinjalo ze-stylistic njenge-provence, izwe noma i-eclecticism. Kulokhu, umhlobiso ulawulwa izinkuni, isikhala, itshe, i-rattan nezinye izinto zemvelo. Ukufakwa okuphoqelekile ekamelweni lokuhlala endlini yendawo yindawo yokucima umlilo .
Ukwakhiwa kwekhishi ku-cottage.
I-cottage ivumela abanikazi bayo ukuba bakhethe imiklamo emihle yekhishi, kungakhathaliseki indawo yayo nokuma kwayo. Ukupheka kuzophela ukulimaza uma uhlanganisa ikhishi negumbi lokuphumula noma igumbi lokudlela, usebenzisa ifenisha ehlukeneyo ngendlela ejwayelekile yendlu. Kunoma yikuphi, indawo yokusebenzela kufanele inikezwe ngezinga elihlukile. Ukwamukelwa okumangalisayo okuzokwenza kube lula ukufeza nsuku zonke izinzwa ezintsha zokuhlala endaweni yokudlela - kunezindwangu eziningana ezinkulu noma ukukhanya kwe-panoramic.
Indlu yangasese ekwakhiweni endlini.
Ubuningi bamamitha ayizikwele akuvumela ukuba ungalondolozi endaweni yokugezela. Ngenxa yalokho, kutholakala amakamelo okukhanya avulekile, ngokuvamile anezingosi eziningi. Izinto ezivame kakhulu ekwakhiweni kwendlu yokugezela ziyizinkuni, amatshe nazo zonke izinhlobo zamatayela. Izinkuni zingaba khona kuphela ifenisha, kodwa futhi ezintweni zokuhlobisa. Ngisho nenye into ekhanyayo, emele ngaphandle kwesizinda esivamile, ishintsha umbono wendlu yokugezela kanye nomzwelo womuntu ohlala lapho.
Umklamo wendlela yokulala e-cottage.
Njengoba ibonakaliswa yendlu, ihholo ligcizelela izinto ezithandwa ngabanikazi bayo, ebonisa ukubukeka kwesitayela esingajwayelekile sendlu. I-hallway ehlelwe ngokufanele iyinethi yefenisha nezinto ezibonakalayo ezidingekayo emnyango wendlu. Ngokungafani nezindawo zokuhlala, igumbi lingaba nokukhanya okuningi kwemvelo, okukwenza kube lula ukukhetha umbala wezinto zokuqeda izindonga nokuyila.
Ukuklama izitebhisi ku-cottage.
Ngaphandle kwenhloso yayo eyinhloko, izitebhisi ezisendlini yokulala zivame ukwengeza umsebenzi wokuklanywa, ukuhlukanisa igumbi lokuqala egumbini lokuphumula kanye negumbi lokudlela. Njengoba senzelwe izigaba ezivulekile, sithola ukukhanyisa okungeziwe kanye nombono omuhle kakhulu kusuka phezulu. Ukwamukelwa kahle ngesibindi kuyisitoreji-isitoreji, lapho ku-niches ngaphansi kwezitebhisi kugcinwa zonke izinhlobo zezinto noma izincwadi. Isiteji esiyingqayizivele senziwe ngamapulangwe noma imabula, siyihlobisa ngezindlela ze-statuettes, kuyilapho isitayela esiphakeme sithanda ingilazi nensimbi eningi. Ukuklama kwezinyathelo akukhawulelwanga kumafomu aziwayo ezakhiweni nezinyathelo. Njalo kukhona imibono emisha. Into eyodwa kuphela ehlala iyadingeka: ukuphepha kwabo.
Amakamelo okulala asetshenziselwa izinkuni eziqinile
Ingaphakathi lendlu yekamelo elilodwa elinomanyolo
Amatshe okufakelwa ekhishini
Amakhetheni egumbini lezingane lentombazane
Ukwakhiwa kwamakamelo okulala
I-gazebo evaliwe ukunikeza
Ubhede bunkunk kubantu abadala
U-Liv Schreiber oneminyaka engu-50 ubudala waphonsa lo mcimbi ngemodeli engu-26 ubudala
Ngingabuyisela yini izikweletu ngoLwesibili?
I-Colombo, eSri Lanka
Korzhiki - iresiphi
Izikhumba - izimpawu
Kungani ubisi luyamalala kumama okhulelwa?
Igazi emcimbini nge-cystitis
Isisekelo sosizo sikaLeonardo DiCaprio sasolwa ngokukhishwa imali
I-Tripod yekhamera ngezandla zakho
I-osteoarthritis ye-hip - izimpawu kanye nokwelapha
Injabulo yokunikeza: amabhonasi angalindelekile ekuphenduleni ukwazisa
I-Spermogram iyinhlangano evamile
Yini okufanele ugqoke i-denim skirt-ipensela?
Ukugeza ijaji eliphansi ngebhola le-tennis